Imveliso yokutya-abavelisi bokutya base China, abaxhasi
Uhlobo lweNdlu yeMifuno yeMifuno
Iiprotheyini eziphezulu, ukutya kwemifuno, ukutya inyama
Izinongo, zinzima kwaye ziyahlafuna, iqhekeza ngalinye limnandi
I-flavour eswiti eswiti, iimveliso zesoya ephezulu
Okunongwe kunye nokuqina ngokwaneleyo, ukhetho lokuqala kubathandi bokutya okunezipayisi.
Ishushu kunye neSermermelli
I-China iyathengisa ngokuthengisa ukutya okulula
Nje ukuba uzame, uya kuyithanda.
Kushushu kwaye kuyomuncu, kunqabile, incasa ebuthathaka, inzima kwaye iyahlafuna
Isiqwengana seBean Curd Slice (igama lesiTshayina uLatiao okanye iLapian), ekwabizwa ngokuba yi-spicy gluten, imifuno yenkomo yemifuno nokunye, luhlobo lokutya okutyiwa okwenziwe ngomgubo wengqolowa, ezinye iinkozo kunye neembotyi njengezona zinto ziphambili. Kutshanje iba kukutya okulula okuthandwa kakhulu e-China nakumazwe amaninzi kwihlabathi liphela.
Mncinci, uthambile kwaye unevumba elimnandi, eliphakathi
Iibhontshisi zeBhontshisi eziColiweyo (umtya ococekileyo)
I-Curd ye-Bean Bean Curd (igama lesiTshayina uLatiao), ekwabizwa ngokuba sisiqholo esinevumba, inyama yegluten yenkomo yemifuno njalo njalo, luhlobo lokutya okutyiwa okwenziwe ngomgubo wengqolowa, ezinye iinkozo neembotyi njengezona zinto ziphambili. Kutshanje iba kukutya okulula okuthandwa kakhulu e-China nakumazwe amaninzi kwihlabathi liphela.
I-Organic Pea Protein Powder
I-ertyisi protein olungumgubo luhlobo lweprotheni ekhutshwe kwipea ngobuchwephesha obuphambili. I-ertyisi ye-ertyisi iqulethe zonke ii-amino acid zomzimba womntu kwaye yeyayo yonke iprotein yamaxabiso. Iiproteni sisiseko sobomi, ngumzimba wezinto ezintathu eziphambili. Ukongeza, ipea ye-ertyisi umgubo kukutya okungengu-GMO, akukho zifo zesoya, kunye nokhuseleko oluphezulu. Umyinge wokufunxwa kwepea protein umgubo ungaphezulu kwe-95%, esombulula ingxaki yokuba umzimba kunzima ukufunxa iprotein ekudleni kwaye unciphise umthwalo esiswini. Le mveliso ngumgubo okhanyayo ongwevu, enyibilikayo emanzini, kwaye yeyona projekthi iphambili ethembisayo yokufumana abantu kwimarike.
Iprotheyini yeSoy enombala
Iprotheyini yethu yesoya eyenziwe ngombala iveliswa ngezixhobo ze-extrusion ezingeniswe zivela e-US kunye nomgangatho ophezulu wasekhaya ongasogqithiso lweembotyi zesoya kunye neprotein yesoya njengezona zinto ziphambili ezenziwayo. Imveliso ibonakaliswa ngokuthungwa kwenyama eluhlaza. Ithatha ubungqingqwa obunemicu kwaye ithatha ukuzinza okuhle, ukutyeba kunye nokuhlafuna inyama emva kokubuyiselwa emzimbeni. Ingacutshungulwa ibe yimicu okanye iziqwengana ezinesibethi okanye inqunube emva kokuntywila. Iproteyini ebunjiweyo yesoya inokusetyenzwa kwakhona ibe ngamacwecwe, imicu okanye iityhubhu, ezibonisa ukuthungwa kwemisonto kunye nokuhlafuna kwenyama.
Imicu yoqobo yase Hawthorn
I-Hawthorn kukutya kunye namayeza, ngokwethiyori yamayeza esiTshayina, i-hawthorn inefuthe elingcono lesibheno, isasaza ukutya, isebenze igazi, ichithachithe i-stasis. Iyeza langoku libonakalisiwe ngophando, i-hawthorn iqulethe i-asidi ye-organic, enokonyusa ukhuseleko lokugaya i-enzyme. Ukongeza, i-hawthorn inefuthe lokuthambisa imithambo yegazi. Ithandwa kakhulu ngabantu abadala kunye nabantwana.Humthi suhambo lolona hlobo luqhelekileyo noludumileyo phakathi kothotho lweemveliso ze-Haw.
Ubungakanani besayensi, ukumodareyitha okumuncu nokumuncu, ukukhetha ngononophelo kwezinto, incasa emsulwa.
Nguye kuphela onezongezo ezinguziro.
Nandipha umgangatho, kulahle ukujongela phantsi.
Eyethu Izinto ezitshixwayo ezincamathelayo zenziwe nge-100% yemifuno kunye neziqhamo, zigcina umbala wokuqala, ukumila kunye nokungcamla imifuno (iziqhamo) ngenkangeleko entle.
Sisebenzisa kuphela ioyile yesundu esempilweni, egaywa ngokulula kwaye ifunxwe. Kwaye zonke iimveliso zisebenzisa ioyile kube kanye, sukuphinda uyisebenzise! I-100% yendalo, akukho qhotsa inzulu, akukho zongezo, akukho zilondolozo. Ukufikelela kuma-95% ezondlo ezigciniweyo, amanqatha asezantsi, ikhalori esezantsi, izondlo eziphezulu, ifayibha ephezulu.
Ipesika etyheli enkonkxiweyo luhlobo lwesithelo esenziwe ngepesika etyheli. Ucebile kwi-vitamin C eyongezelelweyo, umzimba womntu ufuna i-fiber, i-carotene njalonjalo. Ingatyiwa kwangoko emva kokuvula isiciko okanye emva kokufudumeza. Ehlotyeni elishushu, iipesika ezimthubi enkonkxiweyo ziya kungcamla ngcono nangakumbi emva kokuba zifrijiwe. Iziqhamo zethu ezinamathanga ziveliswa kumzi-mveliso wale mihla onemigangatho engqongqo, akukho zongezo okanye izinto ezisigcinayo. Iimveliso zethu zeziqhamo ezisenkonkxweni zithunyelwa kumazwe angaphaya kwamashumi amabini kwihlabathi liphela, kwaye ipesika etyheli enkonkxiweyo yeyona mveliso ithandwayo.
Iipakethi zesosi yeSoy, Intonga yeBhontshisi entsha, Umtya weHawthorn, Ikhukhi yeLadyfinger, Ukutya amandongomane anetyuwa, Iibhiskithi zaBantwana,